I-Blackjack elihle laseBrithani Real Money Casinos Online - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Blackjack
Ukudlala i-Blackjack ngemali yangempela
Kuyini Blackjack Online?
Idlalwa kanjani iBlackjack
Imithetho eyisisekelo ye-Blackjack
Isu eliyisisekelo leBlackjack
Dlala i-Blackjack Online
Odinga ukukwazi nge-blackjack eku-inthanethi!
Ukugembula ku-inthanethi kungaba yindlela ejabulisayo yokudlala amakhadi futhi mhlawumbe uwine imali ethile. Kodwa-ke, kunezinyathelo ezithile zokuqapha umuntu okufanele azithathe ngaphambi kokudlala i-blackjack ngemali yangempela online. Kubalulekile ukusetha isabelomali futhi ungalokothi ubeke engcupheni imali eningi kunaleyo ongakwazi ukuyilahla ngoba ukuwina akuqinisekisiwe.
Kubalulekile futhi ukuthi ungalokothi udlale lapho ungaphansi kwethonya lotshwala. Lokhu kuphazamisa ukwahlulela komuntu futhi kwenze kube nzima ukwazi ukuthi kufanele ume nini. Ekugcineni, ukubeka umgomo wokuthi uzokhipha nini noma yikuphi ukuwina kuyindlela engcono yokuqinisekisa ukuthi inzuzo ayigcini ngokugembulwa ngesikhathi sezandla ezizayo.
Kunezindlela ezahlukahlukene ongadlala ngazo i-blackjack, njengokuhlala ekhasino lezitini nodaka noma cishe kwi-PC. Phila i-blackjack online ikunikeza okuhle kunakho konke imihlaba. Udlala etafuleni lokudlala langempela nomthengisi obukhoma, kepha awudingi ukuya ekhasino ukukwenza.
Imvamisa kuthwetshulwa ekhasino langempela, bukhoma i-blackjack online isebenzisa umsebenzi wekhamera ohlakaniphile nesoftware yekhasino esezingeni eliphakeme ukuletha injabulo yomdlalo kuwe nomaphi lapho ufuna ukudlala khona. Uzobona yonke imininingwane emincane njengokuthengiselana kwamakhadi futhi imvamisa uzokwazi ukuxoxa nomthengisi.
Inhloso yalo mdlalo ku-blackjack ukuthola amaphuzu asondele ku-21 ngangokunokwenzeka ngaphandle kokudlula. Uzogcina udweba amakhadi kuze kube yilapho ubungozi ‘bokuqhuma’ buphikisana nawe. Abadlali abalokothi badlale ngokumelene nomunye ku-blackjack. Esikhundleni salokho, kufanele bashaye isandla somthengisi ukuze banqobe.
Uma sekuyisikhathi sakho sokudlala ku-blackjack, ‘ushaya’ ukudweba elinye ikhadi noma ‘ume’ ukunamathela kulokho onakho. Bonke abadlali banikezwa amakhadi amabili ubuso nobuso, ngaphandle komthengisi ogcina ikhadi elilodwa libheke phansi. Kufanele udlale isandla sakho ngokususelwa ekhadini lomthengisi. I-Aces ibalwa njenge-1 noma i-11.
Ngemuva kokubhekana nomdlali ngamunye amakhadi amabili ubuso nobuso, umdlalo uqala ngokwewashi. Uma ikhadi lomthengisi elilodwa elibonisiwe liyi-ace, abadlali bazokwazi ukukhipha ukubheja kohlangothi ‘lomshuwalense’, okunika amathuba ayi-9 kuye kwayi-4 kumthengisi athola ama-21 ngekhadi lesibili (isandla ‘se-blackjack’).
Ngaphandle kokushaya nokuma, abadlali futhi ‘bangaphinda’ noma ‘bahlukane’ ngezandla ezithile. Ngokuphinda kabili, uphindaphinda ukubheja kwakho ngababili ngokumelene nokudweba kwekhadi elilodwa elilodwa ngaphezulu. Ungakwenza lokho ngesandla esingu-10 noma esingu-11. Ukwehlukanisa kubandakanya ukufaka phakathi izandla zombili bese uphinda kabili ukubheja kwakho.
Isu le-Blackjack lizungeze amathuba. Uma umthengisi enesandla senani eliphansi, ikakhulukazi ikhadi elingu-5 noma elingu-6, amathuba okuthi aqhakaze angaphezulu. Ngakho-ke, abadlali maningi amathuba okuthi beme ngesandla esishaya kancane. Khumbula ukuthi umthengisi kufanele ashaye kunoma yisiphi isandla ngenani elingu-16.
Uma umthengisi enekhadi elingu-8, 9, 10 noma le-11, abadlali ngeke bavame ukuma ngaphansi kuka-17, ngoba ingozi yokulahlekelwa iphezulu. Ama-Strategists ajwayele ukweluleka ngokuthatha ukubheja komshwalense, futhi. Noma ikhipha ukulahleka kwesandla ngokumelene ne-blackjack yomthengisi, amathuba okubheja angama-9: 4 ngokumelene nomdlali.
Ukuthola umdlalo we-blackjack kuqondile inqobo nje uma uthole iminyaka esemthethweni engu-18 edingekayo ngokugembula. Ungadlala ku-inthanethi noma kwelinye lamakhasino omzimba amaningi.
Uma ulandela umdlalo we-blackjack bukhoma ku-inthanethi kuwumqondo omuhle ukubheka ubuqiniso bewebhusayithi ngaphambi kokubandakanya. Izingosi ezisemthethweni zokugembula zinikezwe ilayisense yiGunya lezokuGembula, elinikeza abadlali ukuvikelwa emikhubeni noma emikhondweni engekho emthethweni.
Ngabe iBlackjack inikela ngamathuba amahle kakhulu kumdlali?
I-Blackjack inganikela phakathi kwezingqinamba ezinhle kakhulu kumdlali uma elandela isu eliyisisekelo elilungile lomdlalo. Kodwa-ke, izingqinamba zizohluka ngokuya ngezinga lekhono lomdlali nemithetho yomdlalo odlalwayo.
Kusho ukuthini igama elithi imithetho yaseLas Vegas?
Igama elithi Las Vegas imithetho libhekisa endleleni umdlalo odlalwa ngayo emgqeni weLas Vegas. Le mithetho ivumela umdlali ukuthi aphindeke kabili kunoma yimaphi amakhadi amabili okuqala, umthengisi kufanele ashaye ku-soft-17, futhi ukuhlukaniswa kabusha noma umshuwalense kuvunyelwe, kepha leli gama liyahluka kancane ngokuya ngekhasino.
KuBlackjack, iliphi isu elilungile elisetshenziswayo?
Isu eliyisisekelo elizosetshenziswa lisuselwa kusethi yemithetho yemidlalo. Kodwa-ke, njengoba imithetho ihluka kusuka ekhasino kuya ekhasino, kunomehluko omncane ngokuya ngemithetho nenombolo yamadokodo asetshenziswe emdlalweni.
Ngabe okulindelwe yisikhathi eside komdlali kuthintekile kwabanye abadlali?
Ukulindela komdlali isikhathi eside akuthinteki kwabanye abadlali. Ngokuhamba kwesikhathi, umdlali omubi uzothinta yena uqobo. Umphumela omkhulu wabantu abaningi etafuleni ukwehla kwamazinga okuphumelela jikelele etafuleni.
Ngabe kunesikhathi lapho umdlali kufanele athathe umshwalense noma ngisho nemali?
Uma usebenzisa isu eliyisisekelo, akukhuthazwa ukuthatha umshwalense. Esikhathini eside esithathiwe izingqinamba ezi-3 kuye kwezi-2 zingcono kunokuthatha imali yabadlali abaningi. Lokhu kungenxa yokuthi, ngokuhamba kwesikhathi, umdlali uthambekele ekulahlekelweni ngenxa yenani umdlali alinikelayo ekugcineni.
Yimuphi umdlalo omubi kakhulu ku-Blackjack?
Omunye wemidlalo emibi kakhulu ku-Blackjack kungaba ukuma ku-8, 8 uqhathanisa no-7 kunokuba uwahlukanise. Lokhu kuzoholela ekutheni umdlali alahlekelwe cishe ngamasenti angama-70 kudola njalo uma lokhu kwenzeka. Kodwa-ke, uma umdlali ehlala necebo eliyisisekelo, lokhu ngeke kube yinto ekhathazayo.
Ingabe ideski elilodwa noma umdlalo onezitezi eziningi ungcono ku-Blackjack?
Umdlalo one-deck unenzuzo engu-0.5% kuya ku-0.6% ngaphezulu komdlalo onezitezi eziningi enemithetho efanayo. Kodwa-ke, imiphumela eminingi emdlalweni ivela ekususweni kwamakhadi. Kulula kakhulu ukuthola imithetho nemibandela evumayo kumdlalo onezitezi eziningi.
Uma iBlackjack ishaywa, kungani-ke ungenzi izigidi zamadola udlala kunokuvele ubhale ngakho?
IBlackjack ingashaywa, kepha lokho akusho ukuthi umuntu angaceba ngokuyidlala. Umdlali onekhono kakhulu nge-bankroll encane uzokwenza kuphela amadola ambalwa ngehora.
Yiluphi uhlelo lokubala oluhamba phambili lweBlackjack?
Azikho izinhlelo ezinhle kakhulu zokubala zomdlalo. Iseluleko esihle kakhulu esinganikezwa ukugcina izinto zilula. Lokhu kuzosiza ukuvimbela ukukhathala kwengqondo namaphutha ukuthi angenzeki. Iningi lezinhlelo zokubala zingaphakathi komkhawulo omncane womunye nomunye.
Umdlali angenza imali engakanani yokubala amakhadi?
Inani lemali umdlali angalenza lincike ekhonweni lomdlali, ebhange, nakubungozi abazimisele ukukuthola. Kungenzeka ulahlekelwe yimali. Kodwa-ke, uma umdlali angalinganisa lezi zinto, banethuba lokuthola inzuzo engu-0.5% kuye ku-1.5%.
Ingabe akukho emthethweni ukubala amakhadi?
Akukho emthethweni ukubala amakhadi kwazise umdlali akawushintshi umdlalo nganoma iyiphi indlela. Umdlali usebenzisa ulwazi olutholakala kubo bonke abadlali. Kodwa-ke, noma iyiphi ikhasino inelungelo lokucela noma ngubani ukuthi ashiye noma ayeke ukudlala lo mdlalo, njengoba ezizwa efanelekile.
Yikuphi ukwahluka kokudlala okuphakathi kokuphambili kokuthola izinzuzo ezinkulu zokubala kwamakhadi?
Ukuhluka okuphezulu kokudlala kweBlackjack ukwazi ukuthi ungathatha nini umshwalense futhi ume kuma-16 uqhathanisa nomthengisi ongu-10. Imidlalo ephezulu engu-18 yaziwa njenge-Illustrious 18.
Kungani amakhasino esanikela ngomdlalo weBlackjack, uma ungashaywa?
Amakhasino azuza okuningi kubadlali abangazi ukuthi badlala kahle kanjani noma bamane abanendaba nokuthi balahlekelwe yizinto zokubala amakhadi. Futhi zingenza ukulahleka ngokuba nezinkokhelo ezifana no-6 kuye ku-5 okuheha abadlali abaningi abangenalwazi.
Kungenzeka yini ukushaya umdlalo weBlackjack nganoma iyiphi enye indlela ngaphandle kokubalwa kwamakhadi?
Ngokuhamba kwesikhathi abadlali bakwazile ukuthola izikhala zokuthi imidlalo isethwe kanjani futhi bayisebenzise. Iningi lalezi zikhala selitholakele lalungiswa amakhasino amaningi namuhla. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi uthole imithetho evumayo nokuphakanyiswa ngezikhathi ezithile.
Emdlalweni weBlackjack, yiziphi izinto ezibaluleke kakhulu okufanele uzihlole?
Uma umdlali eyikhawunta yamakhadi, bafuna ukubheka umdlalo osheshayo ongena kahle kakhulu. Isidlali samasu ayisisekelo sifuna umdlalo owodwa wedeski onemithetho engcono kakhulu nezinketho ezitholakalayo. Umuntu ogembulayo ufuna abathengisi abahamba kancane, onezitezi ezigcwele, kanye nesinxephezelo senkululeko.
Yiziphi ezinye zezincwadi ezibhalwe kahle kakhulu ku-Blackjack?
Izincwadi ezimbili eziphezulu zeBlackjack yiBeat the Dealer: Isu Lokuwina Lomdlalo Wamashumi Amabili Nanye
ngu-Edward Thorp neTheory of Blackjack: The Complete Card Counter Guide to the Casino Game of 21 nguPeter Griffin.
Yini okufanele umdlali ayenze kuqala ukuze afunde ukuwina kwiBlackjack?
Umdlali angafunda ukuba umdlali omuhle we-Blackjack ngokufunda ngamasu ahlukene. Umdlali kufanele agcine ukubheja kwabo kuncane futhi afunde indlela ephelele yamasu ayisisekelo. Njalo qaphela nganoma yiliphi isu elithembisa ngaphezu kwe-1.5% inzuzo.
Ngabe izibali zamakhadi zisenqatshelwe kumakhasino?
Amakhasino asakwazi ukuvimbela abadlali ababona njengosongo emgqeni wabo. Amakhasino izinhlangano ezizimele futhi angamema noma angamemi noma ngubani amfisayo. Lokhu kwenziwa ukuqinisekisa ukuthi ikhasino ingenza inzuzo.